प्रहरीकै गाडीले सडक ढाकेर पार्किङ गरेपछि ट्राफिकको ‘ह्विल लक’ – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रहरीकै गाडीले सडक ढाकेर पार्किङ गरेपछि ट्राफिकको ‘ह्विल लक’
admin January 20, 2020 समाचार	0
माघ ०६, काठमाडौं । नेपालमा अगाडिदेखि नै ठुला बडा तथा प्रहरीहरूले जे पनि गर्छन् भन्ने सोच बदल्ने काम भएकाे छ । कानुन र नियम सबैका लागि बराबर हुन्छ । सर्वसाधारणलाई नियमको पालना गराउने प्रहरी नै नियम बिपरित गए उसले पनि कानुनको भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने उदाहरण सोमवार अनामनगरमा देखियो । सडक नै ढाकेर सर्वसाधारणलाई हिड्न समेत नमिल्ने गरी प्रार्किगं गरिएको प्रहरीको गाडीमा ट्राफिक प्रहरीले ह्विल लक गरेको छ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी रामसाहपथको टोलीले प्रहरीको ना१झ १४२५ नम्बरको गाडीमा ह्विल लक लगाएको हो। सडक ढाकेर पार्किङमा राखेको गाडीमा लक लगाइएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस: जीवन जिउन वृद्धको दाम्लो सहारा
पुस माघको कठ्याङ्ग्रिदो जाडो । त्यसमाथि बाक्लो हुस्से, उस्तै चलेको छ सिरेटो । शीतलहरका कारण लपक्कै भिजेको छ सबैतिर । यस्तो अवस्थामा घरभित्र सुरक्षित वस्तु, न्यानो कपडा लगाउन, आगो ताप्न, तातो खानेकुरा खान कसलाई मन हँदैन र रु तर लुगलुग काम्दै बिहान झिसमिसेदेखि नै सडकपेटीमा दाम्लो बाट्न निस्कनु पर्ने बाध्यता छ ८५ वर्षीय वृद्ध लक्ष्मीप्रसाद दाहाललाई ।
कनकाई नगरपालिकाको दुर्गापुरमा डेरा गरी बस्तै आउनुभएका उदयपुर निवासी दाहालको विगत ३० वर्षदेखिको दैनिकी यस्तै छ । दाम्लो बाटेर बिक्री नगरे हात मुख जोड्न समस्या हुने भएपछि पुस माघको ठिहिर्याउँदो जाडो होस् या असार साउनको भेलबाढी नै किन नहोस्, दुई छाक टार्न दाहाललाई दाम्लाकै सहारा लिनुपरेको छ ।
तीस वर्षअघि धन कमाउन उदयपुरबाट झापा आउनुभएका दाहालले धन कमाउन त परै जाओस् गुजारा टार्न समेत हम्मेहम्मे परेपछि हातमा भएको सीप प्रयोग गर्दै दाम्ला बाट्न शुरु गर्नुभयो । शुरुमा भोर्ला, ओदाल ९जङ्गलमा पाइने एक प्रकारको वनस्पति०का दाम्ला बाटेर बिक्री गरी जीवन निर्वाह गर्दै आउनुभएका दाहाललाई सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा नेपाली सेनाले तत्कालीन विद्रोही माओवादी भन्दै जङ्गलमै पक्राउ गरेको थियो ।
ओदाल र भोर्लाको लोक्ता लिन जङ्गल पुग्नुभएका दाहाललाई नेपाली सेनाले पक्राउ गर्दै केरकार गरेपछि दाहालले आफ्नो वृतान्त सुनाउनुभयो । नेपाली सेनाले त्यो दिन दाहाललाई आइन्दा जङ्गल नआउने सर्तमा छाडेपछि उहाँले प्लास्टिकका बोरा र कपडाका दाम्ला बाट्न शुरु गर्नुभयो । अहिले पनि दाहाल कपडा र बोराकै दाम्ला बाट्नु हुन्छ । उहाँले दाम्ला बाटेरै श्रीमती एक छोरा र एक छोरीसहित चार जनाको परिवार धान्दै आउनुभएको छ ।
‘बर्मा गए कर्मसँगै,नेपाल गए कपालसँगै’ भन्ने उखान झैँ ८५ वर्षको उमेरमा पनि उहाँले जाडो गर्मी केही नभनी जीवन जिउनकै लागि दाम्ला बाटेर बिक्री गर्नुपरेको छ । “दाम्ला बाटेर दैनिक ३०० रुपैयाँसम्म कमाउँछु”, दाहालले भन्नुभयो, “दाम्ला बेचेकै पैसाले घर खर्च चलेको छ ।” एउटा दाम्लो ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । दाहालले भन्नुभयो, दिनमा “आठ÷दश वटा दाम्ला बिक्छन् । सानो दाम्लो ३० रुपैयाँमा विक्री गर्छु, ठूलो चाहिँ पचास रुपैयाँमा ।”
पार्टीको ३० लाख रुपैया व्यक्तिको खातामा सारेपछि भीम रावलसहित तीनजना विरुद्ध मु द्दा
केरलाका कर्णेलकाे घरबाट लुकेर बसेका अनुपा र कुमारलाई सन्ताेषले यसरी निकाले (भिडियो हेर्नुस्)
०७५ आश्विन २५ गते बिहीबार ई. सं. २०१८ अक्टोबर ११ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस